NISA oo shaacisay in khilaaf xoog leh uu ka dhex qarxay Al-Shabaab iyo xubno xilalkii laga xayuubiyey – Hornafrik Media Network
Hay’adda Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa qoraal ay caawa soo saartay shaaca uga qaaday khilaaf weyn oo ka dhex jira ururka Al-Shabaab, kaasi oo horseeday is-beddello weyn oo dhacay.
Qoraal ay NISA soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay ku sheegtay in hoggaamiyaha Al-Shabaab, Axmed Diiriye uu Mahad Karataay iyo Bashiir Qoorgaab ka saaray golaha fulinta ee dagaalamayaasha Al-Shabaab, kana xayuubiyay dhammaan xilalkii ay ka hayeen kooxda.
NISA ma aysan bixin wax faah-faahin ah oo intaas dheer, mana shaacin sida ay ku heshay xogtan xasaasiga ah ee Al-Shabaab dhexdeexa ka timid. Sidoo kale ma jiraan ilo-wareedyo si madax-banaan u xaqiijin kara warkan.
Axmed Diiriye, Horjoogaha Argagixisada AS ayaa ka saaray Mahad Karataay & Bashir Qorgaab golaha fulinta xarakada, kana xayuubiyay dhamaan xilalkii ay kahayeen Xarakada, kadib markii ay ka dalbadeen Horjoogaha AS, joojinta qaraxyada joogtada ah ee lagu beegsado shacabka Muqdisho.
— NISA (@HSNQ_NISA) February 3, 2020
Hase yeeshee, qoraalkan ayaa imanaya iyada oo Al-Shabaab ay sheegatay weerarkii 28-kii December ee Ex-Control Afgooye ee Muqdisho, kaasi oo lagu dilay in ka badan 80 qof oo badankood ahaa dad shacab ah.
Al-Shabaab ayaa qirashadaas ka sokow waxay raali-gelin ka bixisay dadka shacabka ah ee halkaas lagu laayey, taasi oo ahayd tallaabo aan looga baran.
Kamaal Guutaale oo war lama filaan ah ka soo saaray doorashadii shalay ka dhacday Dhuusamareeb